Hisy ny fizarana "lay misy ody moka" andiany faha-5
Ho fanafoanana ny tazomoka dia nisy ny atrik'asa izay notanterahina androany 25 mai 2021 teto Toamasina ka nadray anjara tamin'izany ireo olona toa teny manerana ny distrikan'ny Toamasina. Saika miompana betsaka amin'ny fiadiana ny valan'aretina covid 19 isika amin'izao fotoana izao, saingy esty akilany dia tsy azo jerem-potsiny ny firongatrin'ny aretina azo avy amin'ny tazomoka, satria dia maro tokoa ny maty amin'izao.
Izay no mahatonaga izao fivoriana natao tao amin'ny hotely Ravaka etsy Canada mba hijerevana paik'ady hanenana ny taham-pahafatesan'ny olona lavon'ny tazomoka. Nampahafantatra ihany koa i Razafiarisoa Vavy Celestine Talem-paritry ny fahasalamam-bahoaka fa misy ny fanafody hitsaboana ny aretina azo avy amin'ny tazomoka sy TDR fanaovana fitilina eny amin'ny tobim-pahasalamam-panjakana rehetra eto Toamasina. Hisy ny fizarana "lay misy ody moka maharitra" izay hiaraha-miasa amin'ireo tompon'andraikitra isan-tsokajiny eo amin'ny fanjakana sy ireo mpiara-miombon'antoka maro.
Raha tsiahivina fohy dia tamin'ny taona 2018 no nisy hetsika farany fizarana lay misy ody moka maharitra, ka amin'ny volana aogositra 2021 ho avy izao no hisy fizarana andiany faha-dimy. Ho an'ny faritra Atsinananana manokana dia tokantrano manodidina ny efatra tapitrisa mahery eo ho eo no hisitraka izany lay misy ody moka maharitra izany. Raha araka ny voalaza ihany koa dia lay iray ho an'ny olona roa, ka ny tanjona dia 85% ny tokantrano dia ahazo avokoa.
(213) S.Lantomalala : 26-05-2021 - 11:30